Ogaden News Agency (ONA) – Munaasabada 15-ka Ogosto oo laga xusay Dalka Yemen iyo masuuliyiin ka hadashay (Sawiro)
Munaasabada 15-ka Ogosto oo laga xusay Dalka Yemen iyo masuuliyiin ka hadashay (Sawiro)
Munaasabada 15-ka Ogosto ayaa si weyn looga xusay,Magaalo madax-da Dalka Yemen ee Sanca iyada oo ay goob joog ka ahaayeen masuuliyiinta Jaaliyada Ogaadeeniya ee Yemen (JOY).
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loogu dabaal-dagayay 15-ka Ogosto 30-guuradii ka soo wareegtay markii la aas-aasay Urur Weynaha gobanimodoon-ka ah ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadenia (JWXO) ayaa ka dhacday galabnimadii Jibcaha Xaafada Saafiya ee Magaalada Sanca ee Dalka Yemen.
Xafladan oo lagu qabtay Guriga weyn ee Umada Reer-Ogaadeenia (Ogaden Refugee Center) ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu sar-saraysa Jaaliyadda Ogaadeeniya ee Dalka Yemen (JOY),Madax-da ugu saraysa gudiga Qaxootiga Ogaadeniya,madax-da hooyooyin-ka,madaxda OYSU faraciisa Dalka Yemen,aqoon yahan, Dhalin yaro,Culumo awdiin,haween iyo wax garad ka soo jeeda Ogaadeenia.
Munaasabadan oo ahayd mid la qabto tii ugu nasiibka badnayn, haddii ay munaasabad nasiib leedahay, ayaa dadka ka soo qayb galay boqolaal kor u dhaafayay-iyada oo usha kor loo tuuro aan dhulka ku dhacayn -ayaa waxaa in badan oo ka mid ahi ku labis-naayeen Calanka til-maanta u ah madax-banaanida ama gooni isu taaga Ogaadenia.
Waxa lagu furay wac-di diini ah ka dibna heesta calanka ayaa loo saro kacay iyada oo kooxda ‘Horseed Qaran’ ee Suugaan halgameedu ay wacdaro ka dhigeen madasha, ka dib markii mar qudha ay yeedhay jugta iyo dir-yaanka dhaantada cagta iyo midhaha la is la helayo ee koox-da fanka ee Horseed Qaran.Ereyo ammaan iyo qadir loo hayo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya ee loo soo gaabiyo (CWXO) iyo masuuliyiinta Kaadirka JWXO erayadaas oo ay ka mid yihiin: “Wiilka raanta ridi raashka, reenka JWXA la rabaaye, ku raaxeeysa naftaydu.” Waxa cirka is ku shareerayay qaylo iyo sawaxan ay waheliso eli’li iyo mashxarad (ka turjumaysa sida raali looga yahay geediga ay ONLF ugu jirto xoriyad u raadinta umada dulman ee Ogaadeeniya) mar wal ba oo ay goobta ka hadlaan masuuliyiinta nasiibka u helay ee loo igmaday in ay munaasabada ka hadlaan.
Dadka meesha soo buux-daafiyay oo carruur iyo cirroo la ba lahaa, ayaad ka dheehan kartay si fudud, shacuur gaara oo wadaniyeed oo ka muuqata wajiyadooda iyo sida ay ugu ooman yihiin in ay helaan xoriyad farxad leh oo ay aakah ku dhahaan mar uun noloshooda ; taas oo ay ku iloobi lahaayeen Gumeysiga madoow ee la factirsaday.
Khudbado ku aadan hanbalyada dabaal-dega 15-ka Ogosto,Taariikh-halgameedka Ogaadeenia iyo sida maanta Ogaadenia ay ugu dhaw-dahay in ay hanato madax-banaanideeda ayaa madax-da (JOY) iyo masuuliyiintii kale ee ka qeyb galay ay ka jeediyeen munaasabada.
Waxa aan shaki ku jirin in ay ONLF noqotay Jabhad soo marta Ogaadeeniya tii ugu nasiibka badnayd,ma aha in ay odayaal aan la loodin karin ay majaraha u hayaan oo kaliya’e in ay tahay mid ka soo gudubtay is ku day kasta oo ay Itoobiya iyo nacabku rabay in uu ku burburiyo.
JWXO oo u dabaal dayagaysa 30-sano jirkeeda ayaa ku naaloonaysa cudud ciidan iyo mid shacab labada ba , iyada oo aan calanka Ogaadeeniya aynan cad-ceedu ka dhicin.Jabhadan ayaa noqonaysa mid in badan ku caano maashay isku tashi, midntid, iyo midnimo; halka Jabhadihii soo maray gobalka iyaga oo gacan ka haystay Soomali-weyn aynan noqon kuwo cimri dheer yeesha.
Sida wargayska Wikileaks daabacay ,Itoobiya ayaa u aragta ONLF wadka kaliya ee ay leedahay ee ay nafteeda uga baqayso.